IBM na-ekwuputa usoro ohuru iji buso igha Store Online | ECommerce ozi ọma
IBM na-ekwuputa usoro ohuru iji merie wayo na ụlọ ahịa na ntanetị
Eva Maria Rodriguez | | Nche
IBM ekwuputala ihe ohuru patented Usoro na mpaghara nke nchekwa na nchịkọta azụmahịa iji nyere aka na azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị alụ ọgụ. Usoro a na-arụ ọrụ site na nyochaa omume nke ndị ahịa na ịchọpụta eziokwu nke njirimara ha mgbe ha na-abanye ibe weebụ ma ọ bụ ngwa site na iji ụdị ngwaọrụ ọ bụla, ma ọ bụ kọmputa, ama ma ọ bụ mbadamba.
Ihe mebere IBM a bara ezigbo uru maka ndi oru webusaiti, maka ndi n’enye igwe ojii ya na ndi n’enye aka na ngwa ngwanrọ n’ihi na o kariri oru oma dchọpụta ma jikwaa egwu egwu, na-eji nchịkọta iji merie wayo.
Mgbe ndị mmadụ na-abanye na saịtị ma ọ bụ na-eme ụlọ akụ ịzụ ahịa online, jiri nlezianya gosipụta njirimara nke ụzọ ha si eme saịtị ahụ, dị ka ndị a:
ịpị na mpaghara ụfọdụ karịa ndị ọzọ
jiri bọtịnụ elu na ala na keyboard iji mee njem
dabere naanị na oke
emetụ ma ọ bụ slide ihuenyo nke mbadamba nkume ma ọ bụ ama n'ụzọ dị iche.
N’ụzọ yiri etu ndị mmadụ si amata mgbanwe n’omume onye otu ezinaụlọ ma ọ bụ enyi ha n’ekwentị, ọbụlagodi mgbe ọdịyo na-agbagwoju anya, n’ihi okwu ha na-ekwu, etu ha si aza ekwentị, mmegharị ahụ ha, wdg. mepụtara IBM na-enyere ụlọ ọrụ aka nyocha ma chọpụta mgbanwe mberede na omume onye ọrụ na ịntanetị.
Ọ bụrụ na ihe ọhụụ a na - achọpụta mgbanwe n’omume, ọ̀tụ̀tụ̀ nke nke abụọ nyocha, dị ka ajụjụ nchebe. Nke a na-enyere ndị azụmaahịa na ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ aka izere wayo n'amaghị ama na-egbochi ọrụ ndị ahịa ziri ezi.
"Anyị mepụtara na-eme ka arụmọrụ nke nyocha na nchekwa dịkwuo mma yana nghọta sitere na nyocha data oge"kwuru, sị Keith Walker, IBM Master Inventor na onye na-arụpụta ihe gbasara patent ahụ. “Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ agbanwee na mberede ụzọ ha si emekọrịta na ụlọ akụ ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, dịka ọmụmaatụ n'ihi aka gbajiri agbaji ma ọ bụ mbadamba nkume kama iji kọmputa desktọọpụ, Achọrọ m ka weebụsaịtị ndị a nwee ike ịchọpụta mgbanwe ahụ wee rịọ maka mgbakwunye nkwenye njirimara tupu ịnakwere azụmahịa. Ahụmịhe anyị na-emepe ma na-anwale ihe atụ, nke njirimara zuru oke gosipụtara, na-egosi na mgbanwe dị otu a ga-abụrịrị n'ihi aghụghọ, na anyị niile chọrọ ka saịtị ndị a nwee ike ịnye nchebe ka ukwuu site na ịhazi otu azụmahịa anyị ngwa ngwa.
Dika ahia na-agawanye n’ihu Intanet, na ndị ọzọ kpọmkwem site na igwe ojii, ọgbọ ọhụrụ nke ndị omempụ na-eji dijitalụ ọwa, dị ka ngwaọrụ mkpanaka, mgbasa ozi mmekọrịta na igwe ojii, iji nyochaa maka adịghị ike na adịghị ike na sistemụ, gụnyere ike izuru ozi nbanye na paswọọdụ site na saịtị e-commerce nke anyị na-eji kwa ụbọchị. N'agbanyeghị iji okwuntughe siri ike na sistemụ nyocha, nsogbu aghụghọ na-eweta nsogbu ka bụ eziokwu na ụwa dijitalụ nke oge a.
Na Machị, IBM kwupụtara sọftụwia ọhụrụ na ọrụ ọhụụ iji nyere ndị otu aka iji nnukwu data na nyocha ya iji lebara puku ijeri $ 3,5 furu efu kwa afọ na aghụghọ na mpụ ego ndị ọzọ. Usoro mgbochi aghụghọ nke IBM gụnyere onyinye agbakwunyere iji nyere ndị ahịa aka ịchịkọta ma nyochaa usoro data dị iche iche iji gbochie, chọpụta ma nyochaa ọrụ enyo, yana iji sọftụwia eji alụ ọgụ malware nke ndị ohi na-ejikarị.
IBM na-etinye ihe ruru ijeri $ 6 kwa afọ na R&D ma na-enyocha mgbe niile ụzọ ọhụrụ maka nchekwa na nyocha nke ga-enye ụlọ ọrụ na ndị ahịa ya asọmpi. Na mpaghara nke wayo, IBM nwere ihe dịka 290 patenti.
Iji mụtakwuo maka IBM's Smarter Anti-Fraud Initiative, gaa na www.ibm.com/smartercounterfraud. I nwekwara ike iso mkparịta ụka a na Twitter na #counterfraud
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Nche » IBM na-ekwuputa usoro ohuru iji merie wayo na ụlọ ahịa na ntanetị
Naranjas King na-etinye aka na eCommerce na nke mba ụwa site na ịmalite ụlọ ahịa dị n'ịntanetị